» मैले छोरो कसरी बचाउने ?
मैले छोरो कसरी बचाउने ?
अस्पतालको लापर्वाही, सरकारको ढिलासुस्ती
१४ पुष २०७६, सोमबार १४:०४
पैसाबिना मेरो छोरा नबाँचेकोमा म आफैंलाई धिक्कार लाग्नेछ । अरु म के भन्न सक्छु, मलाई यो दुःखको बेला तपाईँहरुको सानो सहयोगले राहत पुग्ने थियो । ‘मेरो छोरो बाँच्यो भने म तपाईँले लगाएको गुन त्यत्तिकै खेर फाल्ने छैन । अहिले मलाई दुःख पर्दा लगाएको ऋणको पैँचों तिराैँला, मलाई सहयोग गर्नुहोस्’, मैले भनेँ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको लापर्वाहीले नै यस्तो समस्या आएको हो । समयमा रेफर गरिदिएको भए राम्रो हुन सक्थ्यो भनेकाले मेरो मनमा धेरै पीडा थपिएको छ । दोस्रोे कुरा नेपाल सरकारको प्रत्यारोपणको कागजी प्रक्रियामा पनि मेरो चित्त दुखेको छ